युबतिहरुमा शृङ्खला बद्दरुपमा सिरिन्ज प्रहार ! – Public Health Concern(PHC)
युबतिहरुमा शृङ्खला बद्दरुपमा सिरिन्ज प्रहार !
काठमाडौं – तीन दिनअघि पकनाजोलकी एक युवती घरबाहिर निस्केकी थिइन्। मोटरसाइलमा आएका युवाले उनलाई पछाडीबाट ढाडमा तिखो वस्तुले घोचेर भागे। उनले न युवा देखिन् न त घोचेको कुरा नै देखिन्/
सोही दिन पकनाजोलमै अर्की युवतीलाई पनि मोटरसाइकलमै आएका युवाले पछाडीबाट प्रहार गरेर भागे। उनी आत्तिएर घर पुगिन्। घोचेको ठाउँमा खास घाउ नदेखिए पनि दुखाइ भने पीडादायी थियो। ती मध्ये एउटी युवतीको ढाडमा र अर्कीको कोखमा घोचिएको थियो। ती युवतीको उमेर २० देखि २१ वर्षको छ। त्यसरी घोच्न आउने युवाहरु २५ वर्षभित्रकै रहेको प्रहरीको अनुमान छ। हालसम्म चार युवतीमाथि त्यसरी प्रहार भएको छ। एकजनालाई डल्लुमा र दुईजनालाई पकनाजोल क्षेत्रमा आक्रमण गरिएको हो। चारजना मध्ये डल्लुमा डेढ महिनाअघि र पकनाजोलमा तीन दिन अघि प्रहार भएको थियो।
डेढ महिनाअघि एक युवती आउँदा चिकित्सकले कुनै शंका गरेनन्। पालैसँग चार जना युवती उपचारका लागि अस्पताल पुगेपछि घटनालाई सतर्कताका साथ हेर्न थालिएको छ। यस्तो घटना भएको आफूले पहिलो पटक थाहा पाएको बताउँदै बास्तोलाले सुई या काँटी केले प्रहार गरिएको ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए।श्रोत
Tags: health infoHealth UpdateKathmanduSyringe Prahar
यस्तो हुन्छ लोकसेवा आयोगको अन्तर्वार्ता प्रक्रिया,२५ कुरा जानिराखौं..!!
निशुल्क गरिदै आएको ईन्फ्लुन्जाको जाचका लागि ४५ सय सम्म लिईयो !
आज योगा दिवस : के हो योग, के छन योगका फाईदाहरु ?